Dib u dhac ku yimid magacaabidda Guddiga Doorashooyinka Heer Federaal iyo Heer Dowlad Goboleed – AfmoNews
Dib u dhac ku yimid magacaabidda Guddiga Doorashooyinka Heer Federaal iyo Heer Dowlad Goboleed
Waxaa dib u dhac uu ku yimid magacaabidda Guddiga Doorashooyinka Heer Federaal iyo Heer Dowlad Goboleed, sababo aan la aqoon awgood.
Sida qorshuhu ahaa in inta u dhaxeyso 10-20 bishan October ayay ahayd in lagu soo magacaabo Doorashooyinka Heer Federaal iyo Heer Dowlad Goboleed, taa oo qayb ka ahayd heshiiskii ay dhawaan Magaalada Muqdisho ku wada gaareen Madaxda Dowladda Federaalka, Dowlad Goboleedyada iyo Gudoomiyaha Gobolka Banaadir.
Ra’iisal Wasaaraha Somaliya, Maxamed Xuseen Rooble ayaa maalmo ka hor warqad furan u diray Madaxda Dowlad Goboleedyada Jubbaland, Hirshabelle, Galmudug iyo Puntland, taa oo ku xusneyd in la dhaafay mudadii laga suggaayay inay ku soo magacaabaan min labada xubnood ee ku meteli doono Guddiga Doorashooyinka.
Warqadaasi waxaa laga reebay Maamulka Koonfur Galbeed, iyadoo ay ka dhigan tahay in Maamulka Baydhabo uu soo magacaabay xubnihii laga suggaayay.
Ma cadda sababta aanay maamulada kale u soo magacaabin xubnaha ay tahay inay ku metelaan Guddiga Doorashooyinka, waxaase jira warar sheegaya in Puntland iyo Jubbaland ay qabaan tabashooyin la xiriira dhabaha ay Madaxtooyada Qaranka u mareyso fulinta heshiiskii doorashada.
Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa 6-dii bishan shuruud ku xiray doorashada lagu wado inay ka dhacdo Gobolka Gedo, isagoona dalbaday in marka hore gobolkaasi laga saaro Ciidamada Dowladda.